सामान्य रुघाखोकी र कोभिडको लक्षण छुट्याउन सकिन्छ ? - Hamro Najar
प्रकाशित मिति: २०७७ श्रावण २९, बिहिबार (१ साल अघि)
काठमाडौं । मंगलबार मात्र काठमाडौं उपत्यकामा १३४ जना सहित देशभर ६३८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । काठमाडौंसहित बारा, पर्सालगायतका जिल्लामा यो रोगका संक्रमितहरू धेरै देखिएका छन् ।
एकातर्फ कोरोनाको त्रास छ भने अर्कोतर्फ मौसमी तथा अन्य फ्लुका कारण पनि कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू देखिने गरेको छ । यही अन्योलका बीच कोरोना र अन्य फ्लुका कारण देखिएको संकेतलाई पहिचान गर्न सकिन्छ त ?
अर्कोतर्फ नियमित पीसीआर परीक्षण गर्न पनि व्यावहारिक र आर्थिक समस्या समेत रहेको जानकारहरू बताउँछन् । अहिले सामान्य लक्षण मात्रै देखिएका व्यक्तिले कोरोना परीक्षण गर्न जाँदा कतिपयको त मासिक आम्दानीको एक तिहाइसम्म खर्च हुने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा नियमित परीक्षण पनि सम्भव छैन । यो पनि चुनौतीको विषय रहेको जानकारहरू बताउँछन् । बास्तोला भन्छन् ‘परीक्षण पनि महँगो भएकोले नियमित परीक्षण सम्भव त छैन । त्यसैले खोकीसँग ज्वरो, खोकीसँग श्वासप्रश्वासमा समस्या जस्ता दुईवटा समस्या एकै पटक देखियो भने चाहिँ परीक्षण गराउनै पर्छ ।’
कोभिड १९ र मौसमी फ्लुमा लक्षणहरू पनि सामान्य र जटिल किसिमको हुने अमेरिकाको सेन्ट्रल फर डिजिज कन्ट्रल एण्ड प्रिभेन्सनले जनाएको छ । सो संस्थाका अनुसार कोभिड र फ्लुकोे केही साझा लक्षणहरू हुने गर्छन् । जस्तो, ज्वरो वा ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, सास फेर्न कठिनाइ हुनु, थकान ९थकान०को महसुस हुनु, घाँटी दुख्नु, रुघा लाग्नु, मांसपेशी दुख्ने वा शरीर दुख्न, टाउकोको दुखाइ र केही मानिसमा बान्ता र पखाला हुनु पनि कोभिडको कारण हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि वान्ता वा पखालाको समस्या वयस्कभन्दा बच्चाहरूमा अधिक देखिने गरेको पनि उल्लेख छ ।
संक्रमणको हिसाबले पनि सामान्य फ्लुभन्दा कोभिड केही बलियो भाइरसको रूपमा मान्ने गरिन्छ । अनुसन्धान रिपोर्टले अन्य फ्लु लागेको एक जनाले १।३ जनासम्मलाई सार्न सक्छ भने कोभिड लागेको मान्छेले २।२५ जनासम्मलाई सार्न सक्ने बताइएको छ ।onlinekhabar